बलिउड छिर्नुअघि चर्चित अभिनेता अभिनेत्रीको नाम यस्तो थियो
काठमाडौ । बलिउडका चर्चित अभिनेता अभिनेत्रीको नाम त दिनहु सुनिन्छ । कतिपय अभिनेता अभिनेत्रीले बलिउडमा प्रवेश गरेसँगै आफ्नो नाम पनि बदलेका छन । कुन बलिउड कलाकारको फिल्म दुनियामा सामेल हुनु अघि कस्तो नाम थियो ? बलिउड छिर्नुअघि केही कलाकारका नाम यस्ता थिए । सन्नी लियोन भन्ने वित्तिकै पोर्न स्टारको रुपमा आम मानिसको मष्तिस्कमा छाप परेको छ। उनी बलिउड छिर्नुअघि उनको नाम करणजित कौर बोहरा थियो ।…विस्तृत समाचार »
जोनको फोर्स टु लाइ चिनमा बन्देज
काठमाडौ । बलिउड अभिनेता जोन अब्राहमलाइ चीन सरकारले चीनमा सुटिङ गर्न रोकेको छ । जोन फिल्म फोर्स टुको सुटिङका लागि चिन पुगेका थिए तर सरकारी बन्देजका कारण उनको सुटिङ रोकिएको छ । सुटिङका लागि सरकारी अधिकारीको इजाजत नपाएपछि अन्तत फोर्स टुमा चिनको सुटिङ समेटिने छैन । फोर्स टु को कहनीमा चिनका कुरा पनि समेटिएका कारण उनी त्यहाँ पुगेका हुन । फिल्मका निर्देशक विपूल शाह फिल्मलाइ…विस्तृत समाचार »
करोडौँकी मालिक्नी गागाले सामान्य गाउँमा विवाह गर्ने
एजेन्सी : करोडौँकी मालिक्नी अमेरिकी गायिका लेडी गागाले केही दिनअघि मात्र विवाह गर्ने बताइन् । अब उनले कसरी विबाह गर्दै छिन् भन्ने पनि बताउन थालेकी छिन् । उनी भन्छिन्– उनको विवाह कुनै सामान्य गाउँमा होस् । त्यो पनि इटालीको । स्मरण होस्, गागा अभिनेता टेलर किन्नीसँग छिटै विवाह गर्दै छिन् । उनीहरू अहिले विवाहको योजना बनाइरहेका छन् । गागा–टेलर लामो समयदेखि सम्बन्धमा छन् । तर,…विस्तृत समाचार »
सोनु निगमलाई विमानमै गीत गाउन लगाउने एअरहोस्जेस निलम्बित
माघ,नयाँ दिल्ली । जेट एअरवेजले विमानको माइक–सिस्टम दुरुपयोग गरेको आरोपमा पाँच एअरहोस्टेसलाई अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गरेको छ । उनीहरुले भारतका गायक सोनु निगमलाई विमानभित्रै गीत गाउन लगाएका थिए । विमानमा चालक दलका सदस्यले प्रयोग गर्ने माइक गायक सोनु निगमलाई दिएर गीत गाउन लगाएको पाइएपछि यस्तो कारवाही गरिएको हो । ४ जनवरीमा जोधपुरबाट मुम्बईका लागि उडान भरेको जेट एअरवेजको विमानमा सोनु निगम सवार थिए । विमानका…विस्तृत समाचार »
फिल्मको लगानीले शाहरुखको विमान खरिद गर्ने सपना अधुरै
काठमाडौ । शाहरुखले अहिले विमान नकिन्ने भएका छन । बलिउड जगतमा सर्वाधिक आम्दानी गर्ने अभिनेता मध्यका एक हुन शाहरुख खान । उनले आफुसँग भएको रकम फिल्ममा लगानी गरेकाले हाललाइ विमान खरिद प्रक्रिया रोकिएको बताएका छन । उनी भन्छन , म कतै सवार हुदा आफुनो नीजि विमानमा सवार हुन चाहन्छु । यसले पनि मलाइ विमान किनु की फिल्म बनाउ भन्ने लागिरहन्थ्यो तर लगानी फिल्मका लागि गरिसके । …विस्तृत समाचार »
तपाइकी गल्फ्रेण्डले तपाइसँग विवाह गर्छिन की गर्दिनन ? यसरी थाहा पाउनुहोस
काठमाडौ । यदि तपाइ कोही सँग डेट गर्दै हुनुहुन्छ बिशेषगरी केटा मान्छे जो आफ्नो गल्फ्रेण्डसँग डेटमा हुनुहुन्छ भने गर्लफ्रेण्ड र आफ्नो भविष्यलाइ लिएर अनेकौ प्रश्न उव्जनु स्वभाविक हो । बिशेषगरी उनीसँग विवाह हुन्छ की हुदैन ,यदि भयो भने पनि कस्तो रहन्छ वैवाहिक जीवन ,विवाहपछि उनले मसँग कस्तो व्यवहार देखाउछिन , विवाहपछिको जिवन शुखमय हुन्छ हुदैन भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने यि कुरालाइ ध्यान दिनुहोस । १…विस्तृत समाचार »
पाकिस्तान प्रवेशमा अनुपम खेरले किन पाएनन भिसा
१९ माघ,काठमाडौ । भर्खरै मात्र जयपूर लिट्रेचरमा सामेल भएर फर्किएका अभिनेता अनुपम खेरलाइ पाकिस्तानले भिसा दिएन । पाकिस्तानको कराचीमा फेब्रुअरी पाँचमा हुने लिट्रेचर फेस्टिबलमा अभिनेतालाइ निमन्त्रणा गरिएको थियो । यस फेस्टिबलमा सामेल हुनका लागि अनुपम सहित भारतबाट १८ जनालाइ निमन्त्रणा दिइएको थियो । १७ जनाले कराची प्रस्थानका लागि भिजा पाएपनि अनुपम खेरले पाएनन । सबैले भिजा पाउँदा आफुले नपाएको मा द्ख लागेको बताएका छन ।…विस्तृत समाचार »
प्रिति जिंटा जस्तै देखिने अक्साना को हुन
काठमाडौ ३१ जनवरीमा जन्मिएकी प्रिति जिन्टा ४१ बर्षकी भइन । हिमाञ्चल प्रदेशमा जन्मिएकी प्रिती जिंटाका प्यान फलोवर धेरै छन तर एकजना विदेशी अभिनेत्री जो दुरुस्तै प्रिति जस्ती देखिन्छीन । सन २०१४ मा एक इण्डियन टिभीमा देखिएकी यि हुन अजरबैजानकी अक्साना रासुलोवा । एउटा रियालीछटी शोमा प्रतिस्पर्धी बनेर आएकी उनको चर्चा बढी उनको रुपलाइ लिएर भयो । उनी बलिउडमा कामगर्ने रहर भएर इण्डिया आएकी हुन रे…विस्तृत समाचार »
कैट्रिना र रणबीर छुट्टिएकै हुन त ?
माघ १७ बलिउड दुनियामा लभ अफेयर र ब्रेकअपका कुरा नौलो होइन । खबर यति चाडो फैलिन्छकी खबर सत्य होस या नहोस । यसैबिच एउटा खबर सार्वजनिक भएको छ । रणबिर कपूर र कैट्रिना कैफ बिचको सम्बन्ध केही समय अघि ब्रेकअप भएको खबर थियो तर साचो अर्थमा ब्रेकअप हो वा होइन भन्ने कुराको अन्यौल उनले लगाएको नेकलेसले गरिदिएको छ । रणविर कपूरको बहिनी रिद्धिमा कै ज्वेलरी…विस्तृत समाचार »
सामाजिक सञ्जालमा फोटो लाइक गर्नु सम्बन्धका लागि कतिसम्म घातक
१७ माघ सामाजिक सञ्जालमा कसैले पोष्ट गरेको तस्बिर लाइक गरेर कहिले तपाइ फसादमा पर्नु भएको छ । बिचार गर्नुु तपाइको सम्बन्ध तपाइले कसैको फोटो तथा स्ट्याटसमा गरेको लाइक तथा कमेन्टकै कारण धमिलिदै त छैन । सामाजिक सञ्जाल आजको दिनमा राम्रा सम्बन्धलाइ टुटाउने दानव बन्ने गरेको कहानी त हामीिले प्रशस्तैे सुन्छौ । त्यही दानवीयता तपाइको सम्बन्धमा नदेखियोस भन्नकै लागि कुनै कुरा लाइक गर्दा पटक पटक सोच्न…विस्तृत समाचार »